Semalt Inozivisa Nyore Tricks Kubvisa WordPress Spam User Registration
Kune vashandisi vema WordPress, ungangodaro uri kugamuchira zviziviso zvakawanda zveakaunti itsva dzekuregeredza dzekambani dzekutsvaga dzinoonekwa paWebsitePress website. Muzviitiko zvakawanda, idzi ndidzo dzepa spam dzinoita kuti iyi motokari irege kunyoresa spam domains. Zvinokosha kuti mumwe webasa webhusaiti aise WordPress spam.
Mamwe mazano ayo vanhu vanoshandisa kudzivirira WordPress spam anowanikwa mune iyi SEO nhungamiro inopiwa naJack Miller, nyanzvi yepamusoro kubva kune Semalt .
Unogona kumisa basa re spam bots sezvinyorwa zvinyorwa zvekushandiswa kwemabhuku - cash indemnity long term care. Izvi ndezvenjodzi-inotungamirirwa nevashanduri vezvinyorwa zvisingabvi zvinobva kuvanhu vanoshanyirwa. Izvo zvipfeko zvinotsvaga kunyengedza hurongwa hwekuita sevanenge vari vatenzi vechokwadi chaivo. Iwe unogona kukwanisa kuisa WordPress spam uchishandisa mamwe mazano ari pasi apa:
1. Isa Dhigirii Dzakashandurwa Mubasa muShokoPress
Imwe nzira yakachengeteka yekugadzirisa WordPress spam inogona kuchinja kushandiswa kwevashandisi kushandiswa. Apo izvi zvinosarudzwa kune munhu wose, mabhota anogona kukwanisa kuzarura maakaunti matsva. Ichi chiitiko chinoguma mumashoko akawanda anokanganisa e-akhawunti itsva yevashandi ari kuiswa. Kuti uite izvi, pinda paIndaneti yako yePeoplePress uye enda kune zvigadzirwa zvekare. Kubva muchikamu chino, chengetedza bhodhi. Nenzira iyi, hakuna munhu anogona kukwanisa kubhadharira kwekinyorwa pawebsite yako. Kubvumira kubhadhara kusarudza, unogona kuisa bhodhi iyi kubvuma. Mukana wekunyorera unogona kupa nzira yakachengeteka yekuvimbisa vashandisi vatsva kumusayiti..
2. Kushandisa Mitemo Yokunyora Mitemo
Kune vanotangira webhusaiti vanoda avo vashandisi kunyoresa pawebsite dzavo, zvinokosha kuti tive mafomu ekuregererwa kwevashandi. Maitiro echikwata chekunyora anogona kurwisana nemigumisiro ye spam bots iyo inogona kugadzira vashandisi vatsva. Imwe nzira yekusika yekuita fomu yechipatimendi yekunyoresa inogona kusanganisira kushandisa WordPress user registration addons. Iwe unogona kukwanisa kuwana fomu yakachengetedzwa zvakanyanya kudarika WordPress fomu isina kuwanikwa. Tsvaga, shandisa uye shandisa purogiramu yekubhalisa fomu. Kubva pane iyi menyu, unogona kukwanisa kuumba mafomu ako ekunyora.
3. Ita kuti email iite basa
Kubvumira basa rekushandiswa kweiyo email kunogona kuva chivimbo chekuchengetedza. Spambots haikwanise kudarika izvi kuchengetedzwa kwechiyero, kusiyana nevashanyi vevanhu. Izvi zvinoreva kuti mushumiri anofanira kuva nenzvimbo yakakodzera yero ye email. Kubva pano, ivo vanofanira kukwanisa kushandiswa kwekubatanidza kunotumirwa ku email yavo yekutendesa. Kuti ugone kuita izvi, unogona kubvumira email kubva kumigwagwa yekugadzirisa yemashoni. Kuti uende kunzvimbo iyi, enda kune 'kushandiswa kwevashandi.'
4. Shandisa mvumo ye admin
Mamwe mawebsite angave asina vashandi vakawanda. Muchiitiko ichi, unogona kusarudza kubvumirana nemavhidhiyo manyore. Iwe unogona kukwanisa kugamuchira kana kuderedza kushandiswa kwebhuku rekushandisa pachikumbiro pasi pezvirongwa uye ipapo kushandiswa kwevashandi. Iyi nzira iri nyore kushandisa, uye vanhu vanogona kupinda mukutonga o ma email kuwana dhijidhe yevashandi.
5. Shandisa captcha code
Captchas anoita chirongwa chekunyora webhusaiti yakachena yevanhu-based. Iwe unogona kumira WordPress spambots uchishandisa captchas. Izvi Zvevanhu Njere Mabasa anovimbisa kuti munhu bedzi ndiye anogona kudarika izvi zvinyorwa.